Somaliland oo xabsiga dhigtay abwaano dareenkooda ku cabiray suugaan (daawo) – Radio Daljir
Somaliland oo xabsiga dhigtay abwaano dareenkooda ku cabiray suugaan (daawo)
Janaayo 13, 2019 2:09 g 0
Ciidamada booliska ee Somaliland ayaa magaalada Hargaysa ee xarunta Somaliland ku xiray suugaanyahan dareenkooda ku cabiray qaab abwaanimo ah, iyagoona dhaliilayay ciidamada booliska ee Somaliland.
Saciid Maxamuud Gahayr , Cabdirixiin Gaaxnuug iyo Cabdiraxmaan Abees ayaa waxaa xiray ciidamada booliska ee magaalada Hargaysa.
Taliye kuxigeenka booliska Somaliland Cabdiramxaan Liibaan Axmed Fooxle ayaa ku eedeeyey inay aflagaaddo ay u gaysteen ciidamada booliska oo uu sheegay inay shacabka ay u shaqeeyaan, isagoona sheegay inuu anshaxa iyo sharciga Somaliland ku xad gudbay.
Balse hogaamiyaha xisbiga Wadani Xirsi Xaaji ayaa sheegay in ay god ku dhacday nidaamkii dimuqraadiga ee Somaliland , waxaana uu sheegay in muwaadiniinta loo xiro fakerkooda ama hal abuurkooda ay tahay arrin aan haboonayn.
Taliyaha Booliska Somaliland oo ka hadlay dhalinyaro suugaanyahan ah oo ay xireen
Qardho: Maanka Dadwaynaha iyo Mikroofanka Daljir & Maxamuud Fantastic (dhegayso|daawo)